Dividend Aristocrats - အချိန်ကျော်လာရင် ၀ င်ငွေတိုးတက်မှု + သမိုင်းကြောင်းထက်သာလွန်မှု - အသိုင်းအဝိုင်းသတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 21, 2019 ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင် ဘ‌‌လော့ခ်, ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
ဤသည် artlce ကွဲပြားခြားနားအမြတ်အစွန်းအစုစုကိုကိုင်ဆောင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအပြာရောင် chip ကိုစတော့ရှယ်ယာကိုင်ဆောင်သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအချို့လိုအပ်နေသောတည်ငြိမ်မှုကိုကူညီနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းများကိုလေ့လာသည်။
နိုဝင်ဘာလစွမ်းဆောင်ရည်အထူးများပါ ၀ င်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောအပြာရောင်ချစ်ပ်ခွဲဝေထိတ် ထိုကဲ့သို့သော Durig ရဲ့တှငျကငျြးပခဲ့အဖြစ် Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အစုစု ကမ်းလှမ်းနိုင်သည် ခက်ခဲတဲ့စျေးကွက်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှအကျိုးအမြတ်များစွာရှိသည်.
A အနိမ့်စွန့်စားမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်မကြာသေးမီကဆောင်းပါး Dividend Aristocrats မဟာဗျူဟာ၏အားသာချက်များကိုဆွေးနွေးထားသည်။
“ ဂန္တ ၀ င်စွန့်စားမှုကင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ဘဏ္Treာရေးအာမခံများဖြစ်သော်လည်းအတိုးနှုန်းများပြောင်းလဲခြင်းမှအချို့သောစျေးနှုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်စတော့အိတ်များအကြားတသမတ်တည်းခွဲဝေပေးသောသူများသည်အချို့သောသူများထက်အနည်းငယ်တည်ငြိမ်ပြီးမတည်ငြိမ်မှုနည်းပါးသည်။"
“ Dividend Aristocrats လို့အမည်တပ်ထားတဲ့အစုရှယ်ယာအုပ်စုတစ်စုဟာအနည်းဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်အတွင်းသူတို့ရဲ့အမြတ်ငွေပေးချေမှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့တာပါ။ သူတို့၏အထွက်နှုန်းသည်အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်သို့မဟုတ်မကျမည်ဖြစ်သော်လည်းထိုကုမ္ပဏီများသည်ခိုင်မာသောစီမံခန့်ခွဲမှုရှိသောခိုင်မာသည့်အဆိုတော်များဖြစ်လေ့ရှိသည်။"
Durig ရဲ့ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အစုစု လွှမ်းခြုံ မြတ်နိုးသူအရစ္စတိုတယ် အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်းထက်ခက်ခဲတဲ့စျေးကွက်များတွင်တည်ငြိမ်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်း။ စဉ်ဆက်မပြတ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အမြတ်တိုးမြင့်မှု၏ရှည်လျားသောမှတ်တမ်းများရှိသည့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်အပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် Durig သည်ကူညီနိုင်သည့်အစုစုကိုဖန်တီးထားသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတည်ငြိမ်မှုနှင့် ၀ င်ငွေတိုးပွားမှုတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်.
ခိုင်မာသောအခြေခံနှင့်အစုရှယ်ယာရှင်များကို ဦး တည်သည်
အခြားခုနှစ်တွင် မကြာသေးမီဆောင်းပါးProShares မှဒါရိုက်တာ Kieran Kirwan ကမတည်ငြိမ်မှု၏မှားယွင်းသောသဘောသဘာဝကိုထောက်ပြပြီးကြီးမားသောရွေ့လျားမှုများကိုချောမွေ့စေရန်ကူညီပံ့ပိုးရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အရည်အသွေးခွဲဝေမဟာဗျူဟာများကိုကြည့်ရှုခဲ့သည် -
“ အမြတ်တိုးမြှင့်တဲ့အရည်အသွေးမြင့်ကုမ္ပဏီတွေကိုသတ်မှတ်တဲ့ဘုံစရိုက်များရှိတယ်။ သူတို့ဟာရှည်လျားသောအမြတ်အစွန်းနှင့်တိုးတက်မှု၏သမိုင်းရှိသည်လေ့ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့တွင်ခိုင်မာသောအခြေခံများနှင့်တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေရှိသည်။ ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိဟာထိပ်တန်းကနေ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့တွေဆီကယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ရှယ်ယာရှင်တွေကိုအခိုင်အမာကတိကဝတ်ပြုမှုကနေလာတာပါပဲ။
“ အမြတ်အစွန်းပေးဆောင်ရသည့်ကုမ္ပဏီများသည်စျေးကွက်ထက်သာလွန်သောသမိုင်းကိုပြသခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှစ၍ အမြတ်အစွန်းသည် S&P 1960 ၏စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေ၏ ၃၃% ကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ”
၎င်းတို့မှပိုမိုမြင့်မားသောအမြတ်များကိုပေးချေလေ့ရှိသောကုမ္ပဏီများ ထိန်းသိမ်းထားသောဝင်ငွေများ ယေဘုယျအားဖြင့်ရှယ်ယာရှင်များမှတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်သည်ဟုယူဆနေကြသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် Durig ရဲ့အစုစု, သိမ်းဆည်းခွဲဝေအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးမြှင့်ဖို့မျှော်လင့်ရသည်အဖြစ် အလှည့်အတွက်အချိန်ကျော်ဝင်ငွေတိုးတက်မှုနှုန်းထုတ်လုပ်သင့်ပါတယ်.
ယင်းအပြင် မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင် ရွယ်တူချင်းများထက်သာလွန်နေသည်မှာယနေ့အထိပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသောအရာများကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဝင်ငွေတည်ငြိမ်မှုနှင့်တိုးတက်မှုနှုန်း.
အဆိုပါ မြတ်များဝင်ငွေမြင့်မား (3% ကျော်နှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးမြှင့်ဖို့မျှော်လင့်ထားအပြာချစ်ပ်စတော့ရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကနေတိုးတက်မှုအလားအလာအပြင်၌ မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင် ရရှိထားသူတစ် ဦး စုစုပေါင်းတစ်သက်တာပြန်လာဖန်တီးခဲ့သည် 14.06%အလားတူကာလနှင့် S&P4ထက် ၄% နီးပါးပိုများပြီးသမိုင်းတွင်မှုနည်းသည် မတည်ငြိမ်မှု (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့အချောမွေ့စီးဆိုလိုတာက).
အစုစု၏နောက်ထပ်သော့ချက်အကျိုးကျေးဇူးမှာအစုစုကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းနှင့် ၀ င်ငွေမျိုးစုံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့် အရည်အသွေးမြင့်အပြာချစ်ပ်အမျိုးမျိုး Durig ရဲ့ထဲမှာပါရှိသော မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင် အမျိုးမျိုးသောမကြာခဏဆက်စပ်မှုမရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၌လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ရန်၊ အကယ်၍ စျေးကွက်ကဏ္ tur တစ်ခုတွင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပါကအခြားကဏ္inများတွင်ကျန်ရှိနေသေးသောအစုရှယ်ယာများသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ဝင်ငွေအမျိုးမျိုးသည်ဤအစုစု၏နောက်ထပ်သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင့်ထဲသို့စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းနေသောအရည်အသွေးမြင့်မြတ်များကွဲပြားမှုသည်လက်ရှိ ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုအပေါ်မှီခိုအားဖြည့်ရန်နှင့်လျှော့ချရန်ကူညီနိုင်သည်။
Dividend Aristocrats နှင့် ပတ်သတ်၍ နောက်ဆုံးသတင်းများကိုလက်ခံရရှိရန်အောက်တွင်စာရင်းသွင်းပါ။
အပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများသည်အလွန်ကြီးမားပြီးခိုင်မာသည့်တိုးတက်မှုနှင့်တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေရှိသည့်ခိုင်မာသောမှတ်တမ်းရှိသည့်ခိုင်မာသည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရစျေးကွက်စီးပွားရေးမှပြန်လည်ထူထောင်ရန်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုတသမတ်တည်းသက်သေပြခဲ့သည်။
အနှစ်သာရမှာတော့ Durig ရဲ့ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အစုစု အမြတ်တိုးပွားမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသောသမိုင်းကြောင်း (၂၅ နှစ် +) ရှိသည့်အပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများ၏အရည်အသွေးမြင့်မြတ်များကိုသာဖမ်းယူသည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုမှတဆင့် ရေ ၎င်းသည် ၀ င်ငွေတည်ငြိမ်မှုနှင့် ၀ င်ငွေတိုးတက်မှုတို့ကိုထုတ်လုပ်သင့်သည့်အစုစုကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်ဟုယုံကြည်သည်။
၀ င်ငွေတည်ငြိမ်မှုနှင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုရှာဖွေနေသူများအတွက်ယနေ့မသေချာမရေရာမှုတွင် Durig ၏ Dividend Aristocrats Portfolio သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူအနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရလိုပါက Durig's Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အစုစု, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး ရေ at (971) 327-8847, ဒါမှမဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ info@durig.com.
ယခုငါတို့အလွန်အောင်မြင်စွာကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Fixed ဝင်ငွေ2(FX2) အစုစု နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Dividend အရစ္စတိုတယ် 40 အစုစု, ငါတို့ ဝင်ငွေ Aristocrats အစုစု TD Ameritrade Institutional တွင်သီးခြားအကောင့်များမှတဆင့်အခြားမှတ်ပုံတင်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးများ၏ဖောက်သည်များအား ဤအချက်သည်သင်နှင့်သင်၏လက်ရှိအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါ။
ခွငဖြေ - အတိတ်ကစွမ်းဆောင်ရည်ကအနာဂတ်အောင်မြင်မှုရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ ပြသထားသောမည်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်မဆိုဤထုတ်ဝေမှုသည် ၉-၁၁-၁၉ တွင်ဖြစ်သည် * အသုံးပြုခဲ့သည့်အခြေခံစံနှုန်းမှာ S&P 11 TR Idx ဖြစ်သည်။ ဒီသုံးသပ်ချက်တွင် Durig Capital မှတင်ပြသောအထွက်နှုန်းမြင့်မားသောနည်းဗျူဟာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည် Durig Capital မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များမဟုတ်သကဲ့သို့လုံခြုံရေး ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်တိကျသောထောက်ခံချက်လည်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင့်တော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချမီမှတ်ပုံတင်ထားသောပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုတောင်းခံသင့်သည်။
2019 abbv adm ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် သြဂုတ်လ ben အပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာ အပြာရောင် Chip စတော့ရှယ်ယာ အပြာရောင်ချစ်ပ် cah ရှဗရွန် တရုတ်နိုင်ငံ cn အများပိုင်သတင်း cvx အမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုးသောအစုစု ခွဲဝေ မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင် ခွဲဝေကြီးထွားမှု ခွဲဝေမှုအထွက်နှုန်း ခွဲဝေအထွက်နှုန်း Dividends đi DJIA ခွေး အဆိုပါ DOW ၏ခွေးများ S & P 500 ၏ခွေးများ dow Dow Jones Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ ရေ Durig Capital ကို ed emr ရှယ်ယာ ETF ဘဏ္ဍာရေး FX2 GPC တိုးတက်မှုနှုန်း မြင့်မားသောမြတ်များအထွက်နှုန်း မြင့်မားသော Dividend အထွက်နှုန်း မြင့်မြတ်သော မြင့်မားသည် မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း မြင့်မားအထွက်နှုန်းထိတ် ဝငျငှေ ဝင်ငွေအမျိုးမျိုး ဝင်ငွေတိုး ဝင်ငွေနည်းဗျူဟာ တိုးမြှင့်ခွဲဝေ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုတေသန ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ kmb KNG ko ခြေထောက် တစ်သက်တာ မိုက်ကယ် B Higgins MMM Nasdaq နိုဝင်ဘာလ အဝတ်မပါသော NYSE အောက်တိုဘာလ Pep ပက်စီ performance အစုစု အစုစုကိုမဟာဗျူဟာ ကြောငျးအုပျကွီး ဆုတ်ခွါခြင်း ပြန်လာ ပြန်လည်သုံးသပ် S&P S&P 500 စက်တင်ဘာလ SP500 တည်ငြိမ်ခြင်း စတော့ရှယ်ယာ စတော့ဈေးကွက် စတော့ရှယ်ယာ t အခွန်အခွင့်အလမ်း tgt ကုန်သွယ် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ ဘဏ္.ာရေး လှ us wba xom
နေတိုး၏စစ်ဆင်ရေးအသစ်နယ်ပယ်အဖြစ်အာကာသ - Starship Troopers ၀ တ္ထုပြည့်စုံလာမည်လော